Litecoin dia - Blockchain News
Febroary 4, 2018 Admin
Litecoin (LTC) noforonina ny Charlie Lee, teo aloha sy ny mpiasan'ny Google Eks-Talen'ny Engineering amin'ny Coinbase. Litecoin dia fikororohana ny Bitcoin Core mpanjifa izay navoaka tamin'ny alalan'ny ny open-source mpanjifa amin'ny GitHub. Litecoin Navoaka tamin'ny Oktobra 2011. Fa tena ela, dia efa ny faharoa cryptocurrency amin'ny tsena Cap. Izany no mahatonga ny olona niantso azy io “Hafanàm-po an volafotsy.” Amin'izao fotoana izao, Litecoin avy fahenina, very ny Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash sy Cardano. Ny tsena Cap dia $8.383.386.336, ary 1 LTC mitovy 0,01799050 BTC, na $152,24. Fa taona 2017, ny vidiny dia rocketed niakatra teny 1,250%.
Ny tambajotra Litecoin Efa voalahatra mamokatra 84 tapitrisa litecoins, izay efatra ny isan'ny vondrona vola toy ny bitcoin. Tahaka Bitcoin, Litecoin ny vanja milevina. Tsy misy afaka mitarika ny irery na barotra, na hiditra ao amin'ny rahona harena ankibon'ny tany dia afaka afa-tsy fahazoan-dalana ireo 3 orinasa Hashflare, IQMining na Genesisy Mining. Tsy toy ny Bitcoin sy ny SHA256, Litecoin mampiasa ny dikan-scrypt notsorina ho toy ny porofo-of-asa hashing algorithm. Ny fampisehoana miantehitra be amin'ny fahazoana ny be dia be ny fahatsiarovana.
Olona maro no mampitaha ny Bitcoin matetika ny volamena, nanao hoe: fa ny tsara indrindra safidy fampiasam-bola. tsara dia, Litecoin azo heverina ho ny vola-ny mpanelanelana ny fifanakalozana amin'ny takina miasa. Litecoin Ny taranaka andian-tsoratra ny fotoana tokotokony dia 2.5 minitra oharina 10 minitra for Bitcoin, izay midika hoe varotra bebe kokoa amin'ny fotoana haingana ny fandraisana ho mpikambana.
Ary, Litecoin no mampandeha Segregated Vavolombelona (nanaraka) ka nalahany Tselatra Networks (Boky), izay be kokoa ny fahafahan'ny Network. Ary ny Atomic Swap teknolojia mahatonga Litecoin mba mivantana nanakalo for Bitcoin, Ethereum, Vertcoin, ary Decred-blockchains izay ihany koa ny mampiasa atomika swaps.
Teknolojia rehetra voalaza etsy ambony dia voalohany ka naka fanahy nampidirina tao amin'ny tambajotra Litecoin. Ny ekipa dia miezaka foana mba hahatonga ny vokatra tsara kokoa. Litecoin dia haingana kokoa malefaka kokoa noho Bitcoin, izay mamela fa hanandrana avy hevi-baovao sy ny traikefa amin'izy ireo tena haingana.
Avy ny fomba fijery, Litecoin ny lehibe, ary lehibe indrindra-mpifaninana tsy Bitcoin fa Zcash. Izany dia midika hoe natsangana teo ambonin'ny Zerocash protocole izay manome ny fiainana manokana, miaro varotra. Ny anarana izay nahatonga Edward Snowden hivoaka ho fanohanana ny cryptocurrency, nantsoiny hoe “ny tena mahaliana Bitcoin hafa.”
Ary avy ny lafiny ara-teknika, Litecoin manana ny vintana rehetra ho tonga ny tsara indrindra ho an'ny antsinjarany transactions.There cryptocurrency ny tsy ho afaka outplay Bitcoin Litecoin eo amin'ny lafiny mpitia. Fa tahaka ny cryptocurrency orinasa matures, Hafanàm-po an vola vitsy dia ho afaka ny hahazo fankatoavana.
Tweets amin'ny SatoshiLite
Revolut mizara ka ho 1 andro avy amin'ny fanampiana crypto varotra ny sehatra
Revolut, ny ara-bola ...
Coincheck mitady appr ...
Square dia mandray New ...
bitcoinandian-tsoratra rojorahona fitrandrahanacryptocurrencylitecoinfitrandrahanaNetwork
Previous Post:Ny fifanarahana vaovao PHANTOM no hifaninana amin'ny Tselatra Network
Next Post:deVere Group nandefa cryptocurrency varotra fampiharana